Rogayyaan kan wanta filatamee jijjiira. LibreOffice n rogayyaa, yammuu dirqalaawwan wantaadhaaf, maraa barruu murteessuu fayyadama.
Durargii rogayyaa agarsiissa.
Rogayyaa, wanta filatametti fayyadama.
Rogayyaa maamiloo haqa. Bakka kana cuqaasiitii, kana booda naannoo durargii keessa cuqaasi.
Akka ati rogayyaa filachuu dandeessuuf, haalata filannoo jijjiira.
Bakka ati durargii wanta keessatti harkistuu, rogayyaa golsirroo tokko fakkasa. arfakkuu tokko fakkasuudhaaf, yammuu harkistuu, Shift diibi.
Bakka ati durargii wanta keessatti harkistuu, rogayyaa luggee tokko fakkasa. Geengoo tokko fakkasuudhaaf, yammuu harkistuu, Shift diibi.
Rogayyaa cufaa keeyatawwan sarara loomaa of keessaa qabu fakkasa. Bakka akka Rogaddee irraa eegaluu barbaaddu cuqaasi, keeyata sarara tokko fakkasuuf harkiisi. Xumuura keeyatawwan sarara qindeessuuf deebisi cuqaasi, keeyatawwan sarara rogaddichaa qindeessuuf, cuqaasuu itti fufi. Rogaddee fakkassuu xumuuruudhaaf, lam-cuqaasi. Rogaddeen akka digirii 45 irraa akka hinsochooneef, yammuu cuqaastuu Shift gad-dhiibi.
Boca rogayyaa jijjiiruu sidandeesiissa. bakka kana cuqaasi, kana booda qabannoota rogayyaa harkisi.
Akka ati boca rogayyaa jijjiiruu dandeessuuf, qabannoota rogayyaa harkisuu sidandeesiissa.
Qabannoota isa boca rogayyaa harkistee jijjiiruu sidandeesiissu saaga.
Qabxii, toorii rogayyaa irraa haqa. Bakka kana cuqaasi, kana booda qabxii isa akka haqamu barbaaddu irra cuqaasi.
Ofumaan, rogayyaa naannoo wantichaa isa gulaaluu dandeessu fakkasa.
Gocha dhumaa waljijijiira.
Gochaa ajaja Gaabbi isa dhumaa waljijijiira.
Qaama kan suurxiqqoo warra halluunsaanii walfakkaatan fila. Bakka kana cuqaasi, kana boosa halluu suurxiqqoo keessaa cuqaasi. Hagamtaa halluu isa filatamee guddisuudhaaf, gatii isa saanduqa Obsii keessaa guddisi.
Obsii halluu, coccobsaa agartuutiif akka dhibbeentaatti galchi. Hagamtaa halluu isa coccobsaa agartuutiin filamee guddisuudhaaf, dhibbeentaa ol'aanaa tokko galchi.
Title is: Rogayyaa Gulaalaa